दुई दशक देखीका काठमाडौंबासीका सपना पूरा गर्ला त मेलम्चीले ? | suryakhabar.com
Home पु.समाचार दुई दशक देखीका काठमाडौंबासीका सपना पूरा गर्ला त मेलम्चीले ?
on: २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २१:१० In: पु.समाचारTags: No Comments
तीन वटा खण्डबाट सुरुङ पखाल्ने (फल्सिङ) को व्यवस्था मिलाइएको मेलम्ची खानपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार सुरुको खण्ड अम्बाथानबाट ग्यालथुमसम्मको खण्ड रहेको छ । करिब पाँच किमी लम्बाइको उक्त खण्ड उकालो रहेको छ । सो खण्ड भरिएपछि पानी ग्यालथुमबाट सिन्धुतिर दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्ने उहाँले जानकारी दिए । सो खण्डको लम्बाई आठ दशमलव दुई किमी छ । तेस्रो खण्डका रुपमा रहेको सिन्धुबाट सुन्दरीजलसम्मको खण्ड सबैभन्दा लामो छ । झण्डै १० किमी लम्बाईको सो खण्ड पार गरेर पानी सुन्दरीजल आइपुगेको हो । एकै पटक नभरिएपनि एउटा तहसम्म पुगेपछि अर्को खण्डमा पानी पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सुरुङको गेट थुनेर परीक्षण भइरहेको छ । अहिले सानातिना समस्या भएमा तुरुन्त देखिने आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमा समस्या भए÷नभएको भन्ने विस्तृत रुपमा जानकारी सुरुङ भरिएपछि नै थाहा हुने उनको भनाइ छ । सुन्दरीजलमा पानी आएर केही समयमा नै पानी प्रणालीमा जाने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई तयारी अवस्थामा रहन भनिएको प्रवक्ता पन्तले बताए । सुरुङ पखालेर सफा भएपछि मात्रै प्रशोधन केन्द्रमा हालिने उनको भनाइ छ । सुरुङबाट पानी सफा भएर आउन अझै केही दिन लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “ठूलो चुहावट नभएकामा चैतसम्ममा पानी प्रणालीमा पठाउन सकिन्छ ।”
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २१:१०